Tottenham oo galabta xusul daartay Arsenal, kana sara-martay | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Tottenham oo galabta xusul daartay Arsenal, kana sara-martay
Tottenham oo galabta xusul daartay Arsenal, kana sara-martay
Kooxda Tottenham ayaa guul wayn gurigeeda white Hart Lane kaga gaadhay dariskeeda Arsenal. Harry Kane ayaa markale indhaha caalamka xaday kadib markii uu kooxda Arsenal tusay dariiqa looga baxo White Hart Lane , wuxuuna Gunners mariyay halkii uu hore u soo mariyay Chelsea. Inkasta oo ay Arsenal gool ku hormartay ayuu Kane kooxdiisa udhaliyay labada gool ee ay guusha ku gaadhay. Mesut Ozil ayaa Arsenal qaybtii hore ee ciyaarta goolka udhaliyay.
Arsenal ayaa marti u ahayd kooxda ay dariska yihiin ee Tottenham, waxayna Gunners oo qaaab ciyaareed fiican bishii udanbaysay ay doonaysay inay kulanka London Derby ay guul ka soo gaadhay kooxda Spurs. Tottenham oo iyaduna qaab ciyaareed fiican soo bandhigtay xili ciyaareedkan ayaa doonaysay inay Gunners mariso waddadii ay utilmaamtay Chelsea.Tottenham ayaa kulanka London Derby ka gaadhay guul qaali ah waxayna gaadhay kulankii labad oo london derby ah kadib markii ay hore Chelsea guuldaro wayn dhabarka u soo saareen.
Kulanka ayaa ku bilawday xamaasad iyo iyo dardar fiican, Tottenham ayaa markiiba bilawday inay halis galiso goolka Arsenal, waxaana halista wayn ku ahaa Kane, laakiin daqiiqadii 11 ayuu Mesut Özil indhaha xaday kadib markii uu goolka furitaanka kooxdiisa Arsenal u dhaliyay, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Arsenal hogaanka kula wareegtay.
Kubbad uu shaqadeeda marka hore iska lahaa Danny Welbeck isla markaana uu Olivier Giroud gacan caawineed ka gaystay ayuu Ozil kooxdiisa ugu dhaliyay goolka.
Tottenham ayaa ka dagaalantay goolka looga hormaray, waxayna bilawday inay weerar joogto ah ku qaado Arsenal balse Arsenal ayaa si fiican iskaga difaacday, halka goolhaye David Ospina uu kubbado fiican kooxdiisa ka badbaadiyay.
Goolhahayaha Arsenal ee David Ospina ayaa u muuqday inuu dhaawac soo gaadhay laakiin wuxuu iska sii watay ciyaarta , wuxuuna sameeyay badbaadino fiican. ugu danbayn qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1:0 ay Arsenal hogaanka ay ku haysay.
markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay markiiba Arsenal bilawaday inay weerar ku qaado goolka Tottenham, waxaana fursad fiican goolka Spurs ku toogtay Cazorla balse goolhaye Hugo Lliris ayaa ka badbaadiyay.
Laakiin Tottenham ayayna waqti dheer ku qaadan inay la timaado goolka barbaraha, waxayna goolkaas la timid daqiiqadii 56 aad, Harry Kane ayaa kooxdiisa udhaliyay goolka barbaraha,wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 1:1 ah.Kubbad uu iska iska badbaadiyay Opins ayuu Kane meel gaaban goolka kaga dhaliyay.
Daqiiqad kaliya kadib ayay Totenham soo qaaday weerar duufaan ah, waxayna dhawr jeer ku sigtay inay la timaado goolka labaad, laakiin waxaa markale uga dhaartay goolhaye Ospina.ciyaarta ayaana gashay waji waali lagu tilmaami karo.
Tottenham ayaa bilawday inay raadiso goolka guusha, waxayna dadaal badan ka dib daqiiqadii 86 aad gool cajiib ah Tottenham u dhaliyay Harry Kane kaas oo kubbad uu meel fog uga soo tuuray Nabil Bentaleb ayuu kane si fiican difaaca Arsenal uga dhex booday kadibna inta uu kubbada madax si fiican ugu darbeeyay ayuu Spurs ugu dhaliyay goolka labaad.Goolhaye David Ospina ayaa daawanayay kubbad oo goolkiisa sii galaysa wax uu sameeyaana may jirin.
Tottenham ayaa qaybtii hore ee ciyaarta goolka looga hormaray waxayna qaybtii danbe ee ciyaarta la timid labada gool taas oo ka saaciday inay guul ka gaadho kooxda ay aadka u xifiltamaan ee Arsenal oo gool uu Ozil dhaliyay kaga hormartay qaybtii hore ee ciyaarta. Arsenal ayaan ciyaar fiican soo bandhigin qaybtii danbe ee ciyaarta taas oo keentay in Spurs ay ka dhaliso laba gool.
Harry Kane oo ah dheeman ka soo dhex baxay horyaalka Ingiriiska ayaa markale indha aduunka xaday wuxuuna kooxdiisa udhaliyay labada gool ee ay Arsenal dhulka ku jiideen.Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:1 ay Tottenham guusha ku gaadhay.Tottenham ayaa sidoo kale ka sare martay Arsenal waxayna soo gashay kaalinta afraad inkasta oo ayna Southampton wali ciyaarin.